कर्मचारीतन्त्रमा कांग्रेसको असफलता | कर्मचारीतन्त्रमा कांग्रेसको असफलता – हिपमत
सत्ता परिवर्तन भएको छ र, कांग्रेसका कर्मचारी केही खुसी देखिएका छन् तर, पूर्ण रूपमा आशावादी भने छैनन् ।
कम्युनिष्ट सत्तामा उनीहरू निकटका कर्मचारीकै संरक्षण हुन्छ र, पछिल्लो चार बर्षमा यो भयानक तरिकाले देखिएको पनि छ । कांग्रेसका जनप्रतिनिधिलाई असफल बनाउन कमरेड कर्मचारीलाई पठाएर असफल बनाउने रणनीति नै थियो ।
हो, उनीहरूले आफ्नालाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ । सूचीअनुसार आकर्षक ठाउँमा पोष्टिङ हुन्छ । तर, कांग्रेसमा त्यो हुन्न ।
त्यसै भएर कांग्रेसका कर्मचारीहरू निकै पीडित छन् । केपी ओली सरकारले कांग्रेस समर्थक कर्मचारीको ठूलो समूहलाई तितरवितर बनाएको छ, त्राहीमाम अवस्थामा बसेका थिए कर्मचारी पछिल्लो चार बर्षमा । यसलाई संरक्षण र एकिकृत गर्ने कार्यको आशा कांग्रेस निकट कर्मचारीको छ तर, सत्तामा गएको दुई हप्ता पुग्नै लाग्दा पनि कुनै सकारात्मक संकेत देखिएको छैन ।
नेपाल सरकारका सहसचिव गोपाल रेग्मी कलैया उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । यो पदअनुसारको न्याय होइन । उनीजस्ता कर्मचारीलाई सत्ताले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाउनुपर्ने हो । कांग्रेसमा रेग्मीजस्ता धेरै कर्मचारी यसरी पीडित बनेका छन् ।
केही अपवाद हुनसक्छन् कांग्रेसका कर्मचारी जो चाकडी गर्न माहिर छन् । जो आफुलाई कर्मचारी मात्र भन्छन् र, खुलेर राजनीतिमा देखिन्नन् । उल्टै यस्तै कर्मचारीको सत्ता पलटपछि भूमिका आकर्षक हुन्छ । जो पार्टी, दल र संगठन भनेर हिडेको हुन्छ उसलाई कुनै वास्ता छैन
सुदीप अधिकारीले गरे उम्मेदवारी घोषणा
सुनसरी क्षेत्र नं. ४ का क्षेत्रिय सचिवमा धिरजको उम्मेदवारी घोषणा
बीपी पुत्र डा. सशांकद्वारा सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा